Horn O Ininzi Indawo yokutyela- IFlethi yeMbali ePhezulu ePhezulu - I-Airbnb
Horn O Ininzi Indawo yokutyela- IFlethi yeMbali ePhezulu ePhezulu
Le ndawo ingasentla Horn O Plenty yokutyela. Esi sakhiwo sesikaMandisa kunye noJeffrey Horn. Le flethi inendlu yokungena yabucala kunye neyokupaka. Indawo yokuhlala ikhululekile kakhulu kunye negumbi lokuhlala eligcweleyo, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Eyakhiwe ekuqaleni yintsapho yakwaTodd ungalindela i-architecture yenkulungwane ye-17-18 ebonisa umthi womthonyama kunye nobugcisa bamatye.
Le ndawo ingaphezulu kweHorn O Plenty Restaurant. Esi sakhiwo sesikaMandisa kunye noJeffrey Horn. Le flethi ilungiselelwe ukungena ngasese kunye nokupaka. Le ndawo yokuhlala ikhululekile kakhulu kunye negumbi lokuhlala eligcweleyo, amagumbi okulala amabini amakhosikazi kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Yakhiwa kuqala yintsapho yakwaTodd ngeminyaka yoo-1700 ungalindela ukubona umthi womthonyama kunye nobugcisa bamatye.
4.80 · Izimvo eziyi-201
Sibekwe kwingingqi yeBedford kodwa indawo yethu ithathwa njengeDolophana yaseWolfsburg. Licandelo elizolileyo ledolophu. Ungalindela ukubona abantwana bedlala kunye nekati yasekhaya ngamaxesha athile izibuza ngayo. IWolfsburg ngokwembali yayiyilali yokusila apho amafama ayekade esila iinkozo kwindawo yokusila, igqwirha lingasekho.
Ubukhulu becala ndifumaneka ngemiyalezo yakwa-Airbnb. Ndineendwendwe ezi-2 ezinceda nonxibelelwano. Ukungena kulula kwaye kuyazicacisa. Ukuba iindwendwe zinemibuzo sizama ukuphendula ngokukhawuleza.